Maalinta: Diseembar 24, 2017
80 boqolkiiba dhismaha dhismaha Terungöl ayaa dhammaaday
Boqolkiiba 80 ee dhismaha goobjoogayaasha ee degmada baykara ee Trabzon ee gobolka ungaykara ee Uzungöl, oo ajandaha ku jirta ayaa la gorfeeyay wada-hadallada aagagga wasakhowga maalmihii dhowaa. Dhismaha birta halkaasoo booqdayaashu ka arki karaan harada meel sare [More ...]
Ingiriiska si ay u galaan sanadka cusub oo leh weeraro tareen oo waaweyn
Boqortooyada Ingiriiska dhexdeeda, Ururka Shaqaalaha Tareenka (RMT) wuxuu go'aansaday inuu shaqo-joojin sameeyo markii ay wajahaan dhibaatooyin muddo dheer soo jiray. Boqortooyada Midowday (UK), midowgu wuxuu go’aansaday inuu shaqo-joojin ka dib markii ay la kulmeen dhibaatooyin muddo dheer taagnaa jidadka tareenka. Marka ugu horeysa, [More ...]
Ku-xigeenka CHP Niğde Ömer Fethi Gürer, khudbadiisi uu ka jeediyay Golaha Guud ee Golaha, Nigde wuxuu rajeynayaa garoonka diyaaradaha, tareenka xawaare sare ku socda, Tamarta, takhasuska iyo mashruucyada biyaha ee Ecemiş kuma jiraan miisaaniyadda sanadka 2018. [More ...]
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin barnaamijka East Express. Arslan, oo sidoo kale ah kuxigeenka Kars, ayaa qiimeeyay xiisaha Milliyet ee Eastern Express. Arslan, Bariga [More ...]
MANULAŞ'dan Digniin Isticmaal Kaarka Ilaalinta Manisa
Go'aanka ay qaadatay Xarunta Iskuxirka Gaadiidka Isku-xirka Degmooyinka ee Manisa ee Magaalo Weyn (UKOME), waxaa la sameeyay qaban qaabooyin si looga hortago adeegsiga Cardiga sharci darada ah ee Manisa ee gaadiidka. Bayaanka uu sameeyay MANULAŞ ee mawduuca, [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay bixinaysaa adeegyo nadaafadeed nadaamkii ugu dambeeyay ee teknoolojiyadda ee loogu talo galay basaska ka hawl gala Kocaeli. Nadiifinta gudaha iyo dibedda si baaxad leh ayaa loo sameeyaa, gawaarida ayaa ugu dambeyntii lagu sameeyay teknoolojiyadda nano [More ...]
225 Thousand Shaqaalaha Soo dhaweynta Garoonka Saddexaad
Wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha saddexaad ee 225 kun oo qof ay shaqaaleysiin doonaan. Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa booqday dhismaha garoonka saddexaad [More ...]